Instagram ndeimwe yemapuratifomu ane chekuita nehupfumi pamusika nhasi. Pfungwa yekubatana imhando yemari mumagariro evanhu. Instagram's Kukura Nzira Dzinokubatsira Iwe Kuvandudza Hupo Hwako Pamhepo, uye kunyanya kubatanidzwa kwako Instagram profile kunobatsirwa kubva, plus iwe ichawana vateveri pa Instagram.
Uyezve, makambani anokwikwidza kubatanidzwa kukuru, sezvo vanhu vakawanda vachidyidzana nezviri mukati, iyo iri mukana wekuti iratidzwe kune vamwe vashandisi.
Kunze kwezvo, kunzwisisa nharaunda yekushambadzira yedhijitari ndiyo nhanho yekutanga yekunzwisisa zviri kunze uko uye kuti vanhu vanoita sei mairi. Kuziva izvo zvazvino zvesocial media maitiro uye mamiriro ezvinhu zvinogona kukubatsira kuona maitiro ekukura yako Instagram..
Akanakisa Instagram Kukura Mazano uye Matanho
Izvo zvakakoshawo kuti udzivise kutarisa kuedza kwako uye nguva pakuwana yako yekutanga $20,000 yekuita mari pa Instagram yako.. Kugadzirisa
Kana iwe uchimhanyisa bhizinesi kana uine chako brand, unofanira kushandisa nyanzvi Instagram account. Nenzira iyi, iwe une kutonga kwakawanda pamusoro peiyo Instagram mbiri uye iwe unokwanisa kuwana yakawanda ye Instagram data kuti ikubatsire kunatsiridza zano rako..
Kunze kwezvo, iwe zvakare une sarudzo yekuwedzera bhatani rekubata iro rinofambisa kutaurirana nevashandisi. Bhizinesi account zvakare inofunga kuti iwe unogona kushandira ads.. Ads = vashanyi vakawanda uye kutengesa. Imwe mukana ndeyekutanga beta kuyedzwa kwezvinhu zvitsva.
Izvo zvakakoshawo kuti udzivise kutarisa kuedza kwako uye nguva pakuwana yako yekutanga $20,000 yekuita mari pa Instagram yako.. Hashtags
Munhu wese anoziva kukosha kwe hashtag, asi vanhu vashoma vanozvishandisa nokuchenjera. Data inotonga iyo Instagram system, uye iyo hashtag nzira inogona kuwedzera kukura kwevateveri ve Instagram.
Iwe wakambonzwa kuti gumi nerimwe hashtag ari optimal. Kana kuti Instagram hashtag inogona kusashanda. Chinangwa ndechekusarudza hashtag inoenderana neyako Instagram post.
Chii chimwe, usashandise hashtag yakawanda sezvinobvira inoenderana nevateereri vako, zvinogona kukanganisa kubatanidzwa kwako.
Instagram hashtag inoshandiswa kutsanangura iyo algorithm. Inobatsira sisitimu kuona kuti ndiani anofanirwa kuona zvaunotumira.
Funga nezvemhando ye Instagram post yauri kuzoburitsa uye yako chinangwa chevateereri.
Kunze kwezvo, funga kuti ndeapi ma hashtag ayo vateereri vako vari kushandisa uye edza kuzviisa mune zvako zvemukati. A branded hashtag inogona kushanda kana bhizinesi rako richizivikanwa mu niche yako.
Awa yakadyarwa mune hashtag zano inogona kukubatsira kunanga vateereri vako zvakanyanya zvakananga.
Izvo zvakakoshawo kuti udzivise kutarisa kuedza kwako uye nguva pakuwana yako yekutanga $20,000 yekuita mari pa Instagram yako.. Wana Ruzivo Kubva kune Vakwikwidzi Vako
Semunhu anofurira, zvinogona kubatsira kudzidza zvakawanda sezvaunokwanisa kubva kune akanakisa maitiro evakwikwidzi vako pa Instagram. Iwe hausi kuda kuvatevedzera zviri pachena, asi iwe unogona kufananidza maitiro avo kune avo Instagram zvinyorwa uye kudyidzana pakati pevateveri vavo.
Kunze kwezvo, kana iwe uchifanira kudzivirira spamming maakaundi aya, unogona kuvaratidza kuti une hanya navo nekusiya Like kana kuCommenta pazvinhu zvavo.
76% yevanhu vanoti vanonyanya kuvimba nezvakagovaniswa nevanhuwo zvavo pane nemhando. Constance
Kuenderana mukuburitswa ndechimwe chezvinhu zvakakosha zvekuyeuka. Zuva nezuva kana kaviri zuva nezuva Instagram post yakaratidzwa kuwedzera budiriro. Zvirinani pane kubhadhara Instagram kukura kana kutenga bogus vateveri.
Chii chimwe, vateereri vanoziva kuti wakazvipira kuendesa zvinhu zvakanaka nguva nenguva. Iwe unova iwe unofanirwa-kuve nemukati mugadziri wevaraidzo, zvinhu kana masevhisi aunokurudzira.
Kunze kwezvo, zvinotora nguva kugadzira anoteedzana Instagram anoteedzera, uye iwe unofanirwa kuenderana mukuedza kwako.
76% yevanhu vanoti vanonyanya kuvimba nezvakagovaniswa nevanhuwo zvavo pane nemhando. Nhau Instagram
Instagram Stories yakatanga seSnapchat Nhau clone uye ikozvino yatora musika. D’ici 2021, il y aura eu plus de 400 millions de stories Instagram téléchargées chaque jour, avec plus de 2 millions d’entreprises utilisant les Stories Instagram.
Kunze kwezvo, kuisa mari muzvishoma nyore Instagram Nhau zuva rega rega kunogona kukanganisa zvakanyanya vateereri vako kuita.
Yako Instagram nhoroondo ichashanda sewechipiri webhusaiti kune rako bhizinesi. Mune zvimwe zviitiko, inogona kukwanisa kuita zvinopfuura static peji rewebhu. Inovaka kuvimba mumhando, humbowo hwemagariro uye kudyidzana kwechokwadi neako tarisiro nevatengi. Le marketing de croissance Instagram est l’outil commercial ultime de la 2021, uye makambani akangwara achatora mukana wakazara.